एकाबिहानै प्रच’ण्डलाई ठु’लो झ*ड्का, वर्षौपछि सार्वजनिक हुँदै वि*प्लव, ओलीको यस्तो सर*प्राइज, यसरी वार्ता | Public 24Khabar
Home News एकाबिहानै प्रच’ण्डलाई ठु’लो झ*ड्का, वर्षौपछि सार्वजनिक हुँदै वि*प्लव, ओलीको यस्तो सर*प्राइज, यसरी...
एकाबिहानै प्रच’ण्डलाई ठु’लो झ*ड्का, वर्षौपछि सार्वजनिक हुँदै वि*प्लव, ओलीको यस्तो सर*प्राइज, यसरी वार्ता
नेत्रविक्रम चन्दले शनिबार विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो पार्टी नेकपा सरकारसँग वार्ताका लागि तयार रहेको सन्देश दिए । विगतमा विद्रोही समूहलाई सरकारले वार्ताका लागि आह्वान गर्दै आएकामा यसपालि नेकपा आफैंले सरकारलाई संवादको सन्देश दिनुलाई अर्थपूर्ण घटनाक्रम मानिएको छ ।
विज्ञप्तिबाट चन्द सरकारसँग वार्ताका लागि तयार छन् भन्ने अर्थ लाग्छ । तर, सँगै प्रश्नहरू उठेका छन्– उनले वार्ताका लागि सरकारले भन्दा अगाडि किन विज्ञप्ति निकाले ? के उनी वार्तामार्फत अहिलेको राजनीतिमा अवतरण गर्न तयार छन् ? के यसबारे सरकार र चन्दबीच केही सहमति भइसकेको छ ?
सरकारी स्रोतहरूका अनुसार सरकार र चन्द समूहबीच औपचारिक वार्ताका लागि विभिन्न चरणमा अनौपचारिक कुराकानी भएका छन् । विगतमा सरकारले गठन गरेको टोलीसँग वार्तामा बस्न चन्द समूहले अस्वीकार गरेको थियो । झन्डै २० महिनाअगाडि सरकारले चन्दसहितका सशस्त्र समूहसँग छलफलका लागि सोमप्रसाद पाण्डे संयोजक, सुरेश आलेमगर र लीला भण्डारी सदस्य रहेको वार्ता समिति बनाएको थियो । तर, चन्द समूह आउन नमानेपछि ६ महिनामै सरकारी वार्ता टोली भंग भएको थियो । अहिले सरकारभन्दा अगाडि चन्द समूहले वार्ताका लागि विज्ञप्ति जारी गर्नु यही विषयसँग जोडिएको छ ।
सरकारका तर्फबाट चन्द समूहसँग संवादमा रहेका एक नेता भन्छन्, ‘पहिला सरकारले गठन गरेको वार्ताटोली उनीहरूले अस्वीकार गरे । त्यसैले यसपालि सरकारले पहिलो औपचारिक पहल उतै (चन्द समूह) बाट होस् भन्ने चाहेको थियो । त्यसैअनुसार चन्दको विज्ञप्ति आएको हो ।’ यसबीच सरकारी पक्षबाटसमेत अनौपचारिक पहल भएको उनले बताए ।
Previous articleचन्द्रमा र एलियनका रह*स्यहरुको खोजपछि, चन्द्रमालाई शुक्रबाट कसरी चो*रियो The Moon Is A Amazing
Next article२४१ जना सवार बिमानको इन्जिनमा आ*गो लागेपछि….. २४ वाट बोइङ्ग एकैचोटी ग्राउन्डेड